မြေငလျင်အကြောင်း – Earthquake/Richter Scale III | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » မြေငလျင်အကြောင်း – Earthquake/Richter Scale III
Posted by Kyaemon on Dec 17, 2012 in Community & Society, Education, Environment, Know-How, DIY, Sciences & Resources, Think Tank |4comments
ရှေ့ပိုင်းကHow Earthquakes Work ဆောင်းပါးမှာရှင်းပြပြီးနောက် ဗီဒီယိုနဲ့တခါထပ်ရှင်းပြနေတာ
ကမ်ဘာကျော်တောင်ပိုင်းCaliforniaရှိSt Andreas Fault မြေငလျင်ပြတ်ရွေ့ကနဲနဲချင်းရွေ့ရှားနေတာကို
How Earthquakes Work – YouTube
Pacific ပင်လယ်သမုဒ်ဒရာမှာရှိတဲ့ မြေငလျင်”Ring of Fire မီးစက်ဝိုင်းကြီး”
Learning about Earthquakes – YouTube
Credit belongs to USGS and others. This lesson is prepared by Hassan Warfa (Caamir) for Amoud University Dept of Education, Borama.
Taylor နဲ့Chrisတို့က ကလေးကြိုက်ကာတွန်း
Why Earthquakes Happen-Taylor & Chris – YouTube
Earthquakes Video- Science Project – YouTube
Magma lava ချော်ရည်ပူတွေထွက်လာတာ
ရှင်းပြသူပါမောက်ခProf Mark Izold
Plate Tectonics – A Documentary – YouTube
ကျေးဇူးပါဗျာ။ လေ့လား မှတ်သား၍ နှစ်သက်တဲ့ ပုံလေးတွေကို
ကျေးဇူးဘဲ ကိုကီမို ရေ
ခုမှဘဲ youtube ထဲမှာ
စာရွက်လေးမှာရိုက်.. ပညာပေးစာစောင်အဖြစ်.. မြန်မာပြည်ငလျှင်ကြောပေါ်က.. မြို့ကြီးတွေမှာဝေလိုက်ရင်.. လူ့အသက်တော်တော်ကယ်နိုင်မယ့်.. စာတွေဖြစ်သွားမှာ..
အထူးသဖြင့်.. ဘာသာရေးရှေးစွန်းစွဲတွေကို.. အသိပေးသင့်တဲ့.. သင်ကြားရှင်းပြသင့်တဲ့.. ပညာရပ်များလို့.. ထင်ပါကြောင်း.. :harr: